Uyilo lwe-OnePlus 7 lutyhilwa zizindlu zalo | I-Androidsis
Ikhamera ye-pop-up kunye nomva ophindwe kathathu we-OnePlus 7 ukhanye kwakhona ngenxa yendlu yabo
Kutshanje, ziye zavela unikezelo lwefowuni ye-OnePlus 7 ezayo,, eneenkcukacha zoyilo lwayo lwamva. Okwangoku, ukuhanjiswa okutsha kuvele, kodwa kwimeko yezixhobo, ezithi baveza ikhamera yangemva kathathu kunye nesenzeli pop-up kwii-selfie.
Imifanekiso ibonisa ukuba OnePlus 7 Inesilayida sokulumkisa kunye nesitshixo samandla kumda wayo wasekunene. Icala lasekhohlo, elingabonwayo kwimifanekiso emitsha, lixhotyiswe ngolawulo lwevolumu. Ukunikezela kunye neenkcukacha ezingaphezulu, ngezantsi.
I-OnePlus 7 iya kubonisa ukusikwa kwekhamera okude ngasemva. Imifanekiso ityhila oko iya kuba yifowuni yokuqala ye-OnePlus yokufika kunye neekhamera ezingasemva kathathu. Imodyuli yekhamera ibonakala ine-laser autofocus sensor phakathi kweesenzi zesibini nezesithathu. Ngaphantsi kwemodyuli yekhamera kukukhanya kwe-LED ezimbini.
I-OnePlus 7 izindlu
Umda osezantsi weflegi kubonakala ngathi usikwe isithethi sangaphandle kunye nezibuko le-USB-C. Kukho ukusika okukhulu kumda ongasentla ongowekhamera ye-selfie ye-pop-up. Olunye usiko kumda ophezulu ngowombhobho. Ngoku ukuvuza okuninzi kuqinisekisile ubukho bekhamera yangaphambili ebonakalayo kwi-OnePlus 7, unokubonisa ngokungabonakaliyo.
Akukho kunqunyulwa kwesikena seminwe esibekwe ngasemva kumatyala ayenzelwe i-OnePlus 7. Oku kubonisa ukuba ifowuni iyakuxhotyiswa nge-in-display yokufunda iminwe, Njengaye OnePlus 6T.
Iingxelo zangaphambili ziveze ukuba i-OnePlus 7 izakufika kukhetho lombala we-gradient, njengoMnyama / Mthubi, Mnyama / Mfusa, kunye Grey / Cyan. Kukho amarhe amaninzi okuba i-OnePlus 7 iya kuthi ixhotyiswe nge-intshi ye-6,5-intshi kwaye ziya kunikwa amandla liqonga leselula Snapdragon 855. Olunye ulwazi lwe-smartphone okwangoku lusongelwe. Kungenzeka ukuba ibe semthethweni ngoMeyi okanye ngoJuni. Ngokubhalwa, akukho lwazi ngamaxabiso abo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Ikhamera ye-pop-up kunye nomva ophindwe kathathu we-OnePlus 7 ukhanye kwakhona ngenxa yendlu yabo
I-Black Shark 2: amaxabiso kunye nokufumaneka eSpain